သင်မကြာခဏ ဖျားနာစေရန်နှင့် ရုပ်ဆိုးစေရန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » သင်မကြာခဏ ဖျားနာစေရန်နှင့် ရုပ်ဆိုးစေရန်
သင်မကြာခဏ ဖျားနာစေရန်နှင့် ရုပ်ဆိုးစေရန်
Posted by moonpoem on Oct 10, 2011 in Aha! Jokes, Satire, Creative Writing, Society & Lifestyle | 14 comments
hair dryerအစားပန္ကာသံုးပါ သင့္အတြက္ ခြင့္၂ရက္ေသခ်ာသည္။
ကျွန်မတို ့တတွေကျန်းမာရေး မဂ္ဂဇင်း ဖတ်သောအခါတွင်လည်းကောင်း၊
ဖက်ရှင်မဂ္ဂဇင်း ဖတ်လျှင်သော်လည်းကောင်းတွေ ့ရသည်က ကျန်းမာရေးကောင်းစေရန် လုပ်ရမည့် လေ့ကျင့်ခန်းများ၊ အလှအပဆိုင်ရာ မေးခွန်းတွေ
ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေသာဖြစ်သည်။ ဗဟုသုတရသည့်အတွက် ဒီစာတွေ ဖတ်ရတာ
အကျိုးများပါသည်။ သို ့သော် သူတို ့တွေ မသိတာ တစ်ခုရှိသေးသည်။ ကျွန်မတို ့သည် ရုံးခွင့်ယူချင်သောအခါများတွင် ချောင်းလေးလောက်တော့ ဆိုးပြတတ်ရမည်။ နှာစီး နေတတ်ရမည်လေ။ ထို ့အတွက်ကြောင့် ခဏတစ်ဖြုတ် ကျန်းမာရေးမကောင်းရန်အတွက် ပြုလုပ်ပုံ ပြုလုပ်နည်းများ ဂျာနယ်များတွင် မပါဝင်သေး။ အဲပြီးတော့ ရှိသေးသည်။ ဒါကတော့ အစိုးရရုံးတွေမှာ အဖြစ်များသည်။ ကောင်မလေး နည်းနည်းပါးပါး ကြည့်ကောင်းပြီဆိုလျှင် ချောပြီဆိုလျှင် ဘာဖွင့်ပွဲ ညာဖွင့်ပွဲအတွက် ဖဲကြိုးကိုင်ရန် ဗန်းကိုင်ရန် အစုံကိုင်ရန်ရုံးပိတ်ရက်တွင် ပိုက်ဆံမရသောဖွင့်ပွဲ ပိတ်ပွဲ တစ်ဝက်တစ်ပျက်ပွဲ ကိစ္စများ လုပ်ရတာတွေကြားဖူးသည်။ ဒီလိုကိစ္စတွေ ဖြေရှင်းဖို ့
ရက်သတ္တပတ်လောက်ရုပ်ဆိုးနည်းတွေ လိုအပ်သော်လည်း ဒါတွေလည်း ဂျာနယ်များတွင် မပါဝင်သေးပေ။
ဒီတော့ ထုံးစံအတိုင်းကျွန်မက တစ်တပ်တစ်အားကူညီသောအားဖြင့်ဖျားနာဖို့အတွက် ၊ ရုပ်ဆိုးသွားရန်အတွက်
အောက်ပါနည်းလမ်းများကို ကျင့်သုံးနိုင်သည်ဟု အကြံပေးပါရစေ။
၁။ အာလူးကြော်၊ ဖက်ထုပ်ကြော် ဆီနှင့်ကြော်တာ မှန်သမျှ အကုန်စားပါ။ ချိုချဉ်များများ စားပါ။ အအေးသောက်ပါ။မကြာခင်ချောင်းဆိုးမည်ဖြစ်သည်။ သင့်အတွက် ခွင့်၂ရက်သေချာသည်။
၂။မနက်ပိုင်း ရေချိုးရင်း ခေါင်းလျှော်ပါ။ ပြီးရင် ပျော့ဆေးသုံးပါ။ ရေကိုနာရီဝက် တစ်နာရီချိုးပါ။
လျှော်ပြီး မခြောက်သေးသော ဆံပင်အတွက် hair dryerနှင့် မမှုတ်ပါနှင့်။ ပန်ကာဖွင့်ကာ အခြောက်ခံပါ။
ရေခဲရေ သောက်၊မိုးရေထဲ လမ်းလျှောက်ထွက်ပြီးမှ အဝတ်အစားမလဲဘဲ ရုံးကို သွားလိုက်ပါ။
ခွင့်တစ်ပတ် ရပြီ ဖြစ်သည် ့အတွက် သင်ပျော်ရွှင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။
၃။ အသားဖြူသူဖြစ်ပါက အောက်ခံမိတ်ကပ် အညိုရောင်၊ ဝါသူဖြစ်ပါက ပန်းရောင်၊ ညိုသူဖြစ်ပါက အပြာရောင်
ကို ရွေးချယ်ပြီး လိမ်းပါ။ ပြီးလျှင် ပေါင်ဒါကို ဟိုမနှံ ့ဒီမနှ ံ့ပွတ်ပါ။ မျက်ခုံးမွှေးဆွဲသော ခဲတံအနက်ဖြင့် နှုတ်ခမ်းနီဆိုးပါ။
အပေါ်က အပြာဝတ်လျှင် အောက်က အနီဝတ်ပါ။ လုံးဝ ကွဲပြားအောင် ဝတ်ပါ။ ပြီးလျှင် ဘွတ်ဖိနပ်စီးပါ။
ခေါင်းကို ဆံပင်တခြမ်းချည်ပြီး တခြမ်းချသွားပါ။ သင့်အတွက် ဗန်းကိုင်ခိုင်းခံရမည့် အန္တရာယ်များအပြင်၊
ကဲ ကျွန်မရဲ့ ပထမပိုင်းသင်ယူပို ့ချခြင်းကတော့ ဒီလောက်ပါပဲ။
မှတ်ချက်၊ ၊( ကျန်းမာရေး မကောင်းရန် လုပ်ဆောင်ရင်း
တကယ် အသက်ထွက်သွားခြင်း၊ သင်၏ အရူးစတိုင်အားတခြားတကယ့် အရူးကး တွေ ့ပြီးအိမ်လိုက်လာခြင်းများကိုတော့ တာဝန်ယူမည် မဟုတ်ပါ။)
ဒုတိယပိုင်းကိုတော့ သတင်းများအပြီး ည၉နာရီတွင် ဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
အိမ်နေရင်းနဲ့ကြက်သွန်နီ ချိုင်းကြားညှပ်ပြီး ဖျားချင်ယောင်ဆောင်တာက အဆင်ပြေတာ။ ရုံးမှာကျတော့ ပြုတ်ကျရင် ဘယ်နှယ့်လုပ်မလဲ ကိုရင်မောင်ရဲ ့။အလိမ်ပေါ်လို ့ဒဏ်ငွေဆောင်နေရပါဦးမယ်။
လမင်းကဗျာရေ ပထမပိုင်းသင်ခန်းစာကတော့ လိုက်လုပ်လို့အဆင်မပြေဘူး
ဂျိုင်းကြားထဲက ကြက်သွန်ဥ ပြုတ်မကျအောင် တိပ်ကြီးကြီးနဲ့ သေချာကပ်ထားမှပေါ့ လမင်းရယ်…။ လုပမယ်ဆိုလည်း အပီအပြင်လုပ်မှပေါ့……..
အလုပ်လွန်ပြီး ဘဝတစ်ပါး ဟန်းနီးမွန်း ထွက်နေရပါဦးမယ်..
ကျန်းမာရေး..ဒေါင်ဒေါင်မြည်ပြီး..ဂျွန်ဆော ထက် ချောအောင် ဘိုလုပ်ရမလဲ..
ခွင့်မရရင်လဲ နေပါစေတော့ … ဒီနည်းတွေတော့ လုပ်ချင်ဘူး … နောက်နည်းတွေကိုပဲ စောင့်တော့မယ် …
ခွင့်တော့ လိုချင်မိသား … ဒါပေသိ ဒီနည်းတွေနဲ့တော့ အဆင်ပြေမယ်မထင် .. ရုံးကလဲ အခုနောက်ပိုင်း ကြပ်တယ် … ရုံးပျက်ပြီး ပြန်တက်ရင် ဆေးစာပါမှတဲ့ … ဆရာဝန်နဲ့ သွားညှိုထားရမယ့်ပုံ ….
၁။ အာလူးကြော်၊ ဖက်ထုပ်ကြော် ဆီနှင့်ကြော်တာ မှန်သမျှ အကုန်စားပါသည် ။ တော်ဝင်က ပေါက်ပေါက်ဆုပ်ချိုချိုလေးစားပါသည် ။ အအေးလည်းသောက်ပါသည် … ချောင်းမဆိုးပါ ။
လျှော်ပြီး မခြောက်သေးသော ဆံပင်အတွက် hair dryerနှင့် မမှုတ်ပါဘူး … ပန်ကာနဲ့တော့ အခြောက်မခံပါဘူး … ရေခဲရေသောက် ၊ ရေခဲမုန့်စားပြီး မိုးရေထဲ ထီးဆောင်းလမ်းလျှောက်ထွက်ပြီးမှ အဝတ်အစားမလဲပဲ ကျူရှင်သွားပါသည် ။ မဖျားပါ …
သမီးကဖျားရင် ၂ ရက်လောက် အချိုရည်တောင်မသောက်နိုင်ဘူး … အရမ်း သိသိသာသာ ပိန်လွန်းလို့ ဖျားချင်နေတာ … ဝနေလို့
အေးဗျာ ရုပ်ဆိုးနည်းပေးလို့ ဝမ်းသာတယ် ။
သေသေချာချာ ကျင့်သုံးဦးမှ …
နို့မို့ဆို ကိုရီးယား မင်းသားနဲ့ မှားမှားပြီး ရည်းစားစကားလိုက်ပြောတတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေကို ရှောင်ရတာကိုက အလုပ်တစ်လုပ် ဖြစ်နေတယ် ..
အဲ့ဒါတွေရှောင်ချင်လျှင် အဓိကက ဘယ်နားမှန်းမသိတဲ့နေရာ နာပြလိုက် ။ ခါးကို ကိုင်းပြီး ဗိုက်နားလက်ကလေးယှက်လို့ မလူးသာ မလွန့်သာ ရုပ်နဲ့ လမ်းလျှောက်ပြ ။ စကားပြောလျှင် တဖြေးဖြေးချင်း အသံတိုးတိုးလေးနဲ့ပြော ဟဲဟဲ ဘာဖြစ်လဲမေးလျှင် အစာအိမ်ယောင်လို့ ၊ အူအတတ်ယောင်လို့လှုပ်လို့မရဘူးပေါ့:P
နေမကောင်းတဲ့ပုံလုပ်ပြီး ရုံးကခွင့်ရဖို့ကတော့ ကိုယ်တွေအတွက် လွယ်လွယ်လေး
နို့ပေမယ့် ရုပ်ဆိုးအောင်လုပ်ဖို့ တော်တော်ခက်နေတယ်
ကျွန်မတော့ မလမင်းကဗျာပြောသလို ရုပ်ဖျက်လည်း ရုပ်ဆိုးတာမျိုးဖြစ်မယ်မထင်ပါဘူးရှင်
ဒီထက်ပိုဆိုးအောင်ရုပ်ဖျက်တာတောင် တချို့က ရှာကီရာနဲ့လူမှားနေလို့
ရုပ်ဆိုးနည်းရေးလိုက်မှပဲ ငါ့တို ့ရွာသူရွာသားတွေ ပေါတာ ချောတာသိတော့တယ်။ရှာကီရာတွေရော၊ကိုရီးယားမင်းသားတွေရောဆိုတော့ အားရင် သူကြီးကိုမော်ဒယ်ရှိူးလုပ်ခို်င်းဦးမှပဲ။